” အေးရိပ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ” အေးရိပ် “	3
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Sep 12, 2016 in Photography, Poetry |3comments
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ပန်းသမျှ ပြေပါစေ….
Foolish Girl says: ငါဟာအိမ်ကိုလွမ်းနေသူ…….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အိမ်က အမေ မျှော်နေတယ်